Ungangikhombisa ithuluzi elihle lokuthuthukisa i-Amazon yokuthengisa?
Ngaphambi kokuba siqale, ake sibhekane nayo - uhlu lwakho lomkhiqizo lukhulu kakhulu ukulandelela nokuphatha ukuze uthuthukise ngempumelelo ukuthengisa kwe-Amazon okwenza kube yedwa. Kungaba umsebenzi ongafinyeleleki noma ongenakwenzeka ngokuphelele, ngaphandle kokuthi uzozisiza nge-toolkit yokulandelela kanye nethuluzi lokucwaninga. Ngenhlanhla, kukhona isofthiwe ehlukene ekhona manje emakethe. Ngenkathi isabelo sezingonyama zalaba basizi be-intanethi singasetshenziswa mahhala, ezinye zezinamandla kakhulu zifaka izinguqulo zabo ezigcwele ngokukhokhwa - sites pr pr para backlinks. Noma kunjalo, nansi izixazululo zami ezintathu eziphezulu ezibonakalayo ngokusebenza okuqinisekisiwe ukusetshenziswa kokuthuthukisa i-Amazon yakho yokuthengisa nokwenza konke okulula kakhulu.
Impendulo ye-Genius - ingaba impendulo eyenziwe kahle ohlelweni lokubuyekeza e-Amazon olusebenza ukwenza wonke umthengi aneliseke ngokuphelele Yebo, uma ungafuni ukuthola uhlu lwakho lomkhiqizo udonsa phansi phansi kokuseshwa lapho. Leli thuluzi lasebenza kimi njengomlingo, njengoba ngangethusa kuzo zonke izimpendulo ezingalungile ezifuna ukulungiswa ngokushesha-ngaphambi kokuthi zingadala noma yimuphi umphumela omubi ebhizinisini lami. Yini okungaphezulu - ungasebenzisa i-Feedback Genius ukuze usebenzise i-imeyli ezenzakalelayo ngendlela yesicelo esihloniphekile sokuthengwa kwabathengi bamuva - nje ucele ukuphonsa impendulo enhle noma ubuyekeze. Futhi isebenza, ngoba ukulondoloza ukwaneliseka kwamakhasimende okwanele kuye kwaba yindlela eqondile - hhayi kuphela ukuthuthukisa ama-Amazon yokuthengisa, i-nut ukuze ihlinzekele cishe noma iyiphi iphrojekthi yokuhweba.
i-Jungle Scout - ingaba isisombululo esiphezulu sokuthuthukisa ukuthengiswa kwe-Amazon kulabo abathengisi abazithola behluleka ukuthola ukuqonda okusha emkhiqizo omusha, izindleko eziguquguqukayo noma ukusatshalaliswa okuhlakaniphile ukuze bahlale umncintiswano we-cutthroat ngempela olawula lapho. Zigcine uzivuselele futhi ungalokothi ukhohlwe amathuba okuthola amathuba, okungenani ngezikhathi ezithile. Imiphi imikhiqizo esezintweni zokuthenga ezisezingeni eliphezulu ku-Amazon okwamanje? Yimaphi ama-niches asanda kuba ngaphezulu kakhulu? Imiphi imikhiqizo emisha kakade idinga kahle futhi kufanelekile ukubonisa ohlwini lwakho lwemikhiqizo? I-Jungle Scout iyinhlangano yokubuka i-niche yangempela ezokusiza ukuthi uveze noma yikuphi ukugeleza okufihliwe kwezimali ukuze uthuthukise ukuthengiswa kwe-Amazon yakho futhi uqhubeke usebenzisa isinyathelo esisodwa ngaphambi kwabamakethe bakho abaseduze kakhulu.
- Okunye okukhethwa kukho ukukhulisa ukuthengiswa kwe-Amazon yakho ngokucwaninga komkhiqizo kusebenze ngendlela efanele. Futhi ngincoma ngokuqinile okungenani leli thuluzi ukuthola ezinye izinzuzo ezilandelayo: amagama angukhiye aphezulu kanye nemishwana yokusesha yabamncintiswaneni bakho etholakalayo ngenzuzo yakho siqu, ukulungiswa okuhle kakhulu kwemikhankaso ye-PPC, ukuqonda okubalulekile ngamagama angukhiye angenamandla, umgwaqo wendlela okukhomba ngayo indlela eya emaphandleni aphezulu-ngenzuzo ngokuncintisana okulinganiselwe ukuthi ungene kuwo, ngisho nangaphezulu. Ngemuva kwalokho, ngesici sokulawulwa kwezinhlekelele kanye nokulinganisa okukhethwa kukho kokuthengisa Isigameko sivame ukusetshenziswa njenge-stop-one-shop ngisho nabathengisi abaningi abanamakhono amakhulu e-Amazon.